अभिनेत्री साम्राज्ञीको प्रश्न– ‘यति धेरै घृणा किन ?’ - Everest Dainik - News from Nepal
अभिनेत्री साम्राज्ञीको प्रश्न– ‘यति धेरै घृणा किन ?’
काठमाडौं, साउन २२ । नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई अहिले दर्शकको गालीमात्र आइरहँदा तनाव भइरहेको छ । आफ्नो प्रेमीसँग बालीमा खिचेको तस्वीर भाइरल भएपछि उनी तनावमा परेकी हुन् ।
उक्त तस्वीर सार्वजनिक भएसँगै साम्राज्ञीले धेरै नराम्रो प्रतिक्रिया पाइन् । त्यसैको आवेगमा उनले ‘कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किदै गर्छ’ भन्दै इन्स्टाग्राममा लेखिन् । सोही कुराले पनि दर्शकको उनलाई हेर्ने नजर बदलिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस चलचित्र ‘सत्यम शिवम सुन्दरम्’को पहिलो भिडियो सार्वजनिक
चलचित्र ‘मारुनी’को ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै यसको प्रशंसा भइरहेको छ । नायक पुष्प खड्काको पनि दर्शकले तारिफ गरिरहेका छन् । तर, साम्राज्ञीले भने दर्शकको गाली नै सहनुपरेको छ । यो कुराले साम्राज्ञीको करिअरमा नै असर परेको विश्लेषण पनि गरिएको छ । साम्राज्ञीले यी सबै कुरा देखिसकेपछि इन्स्टाग्राममा एउटा भिडियो पोष्ट गर्दै ‘यति धेरै घृणा किन ?’ भनेर प्रश्न गरेकी छिन् ।
याे पनि पढ्नुस चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को ‘दुबो फुल्यो’ गीत सार्वजनिक
उनले भनेकी छिन्– ‘राम्रो काम गर्न छोडी अरुको कुरा काटेर आफ्नो समय फाल्नेहरुसँग म माफी चाहन्छु । साँच्चै, मान्छेले किन यति धेरै घृणा गर्छन् ? अरुको अनुहारमा हाँसो देख्न नपाएर के पाउनु भयो ? मलाई यो कुराबाट छुटकारा चाहिएको छ ।’
साम्राज्ञी अभिनित दुई चलचित्र ‘मारूनी’ र ‘रातो टिका निधारमा’ रिलिजको तयारीमा छन् । यी दुवै चलचित्रलाई साम्राज्ञीको पछिल्लो गतिविधिले असर गर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस सुरु भयो रिजन अफ रिया